UNWTO inofamba ichienda kuSaudi Arabia paKubata: Secretary-General Zurab Pololikasvili mune Big Dambudziko?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » UNWTO inofamba ichienda kuSaudi Arabia paKubata: Secretary-General Zurab Pololikasvili mune Big Dambudziko?
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gurukota reSaudi Arabia rekushanya Ahmed Al Khateeb. ndiye chaiye anofambisa uye anozunungusa pasirese yepasi rose yekushanya, nepo UNWTO Secretary General Zurab Pololikasvi angave asiri pabasa munguva pfupi.
Iyo UNWTO headquarter kufamba yakamira, asi uku hakusi kuguma kwenyaya parizvino.
Kutamisirwa kweNzvimbo Yemusoro weUNWTO kubva kuSpain kuenda kuSaudi Arabia kwakawana kutarisisa kweMutungamiriri weSpain, Pedro Sánchez uye Secretary-General weUN, Antonio Guterres.
Tiye weSpanish PM akange afona pamwe neSaudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud, uko kufamba kweUNWTO kunogona kunge kuri iko kwakanyanya chikonzero chekufona nezveramangwana rehukama hweSaudi neSpain.
Zvinoshamisa kuti, Antonio Guterres, Secretary-General akapindawo. Makore evhoti kunyengedzerwa naUNWTO Secretary-General Zurab Pololikasvili haana kumbobatwa navo, uye nanhasi anofuratirwa muNew York. Iye zvino SG yave kubatanidzwa mushure mekuyeverwa nehurumende yeSpain.
Kupindira kweUnited Nations kuisa bata kune UNWTO danho rakabudirira izvozvi.
Spain zvisinei inogona ikozvino kusarudza kubvisa rutsigiro rwayo kuna Secretary-General Pololikashvili.
Zvinoenderana nezvinyorwa zvinyorwa kubiridzira mune Ndira kusarudzwazve kwaZurab Pololikashvili semunyori mukuru weUNWTO neUNWTO Executive Committee iri kuuya. Nerubatsiro rweSpain rutsigiro rweanotya zvisiri pamutemo Secretary-General anogona kuzopedzisira asvika kumagumo.
Sarudzo zvakare yeZurab inofanirwa kusimbiswa kuMoroccan General Assembly kupera kwegore. Kwete chete Spain, asi dzimwe nyika zhinji pasi rose dzinogona uye dzinofanirwa kupokana nekusimbiswazve kweZurab kwetemu yake yechipiri, uye nekushaisa sarudzo dza2018 zvachose.
eTurboNews rzvichinyatso kutaurwa kuti UNWTO Secretary-General haana kumbobvira asarudzwa nemazvo uye zviri pamutemo mune yake yazvino 2018 temu.
Kufamba kweiyo UNWTO Headquarter kuenda kuSaudi Arabia
Kunyangwe hazvo danho iri rakanga risati rave chikumbiro chepamutemo nemaSaudis, hazvina kumbobvira zvanyorwa zvichinyorwa kuHurumende yeSpain, kana kuUNTWO, Saudi Arabia yaishingairira uye pachena kuita kuti kufamba uku kuitwe.
Zvinotaridza kuti Zurab Pololikashvili akavimbisa Saudi kutsigira kwake. Akavimbisawo kutsigira kwake kuSpain. Tweets dzakatumirwa naZurab dzichiratidza kutsigira kwake Spain dzakabviswa kuti dzikanganise kumira kwake kaviri panyaya iyi.
eTurboNews yakasvika kumakurukota mazhinji ezvekushanya pasirese. Vese vakabvumirana kuti vangadai vakavhotera kutamira kuSaudi Arabia, uye vakatenda rutsigiro rweSaudi Arabia rwakanga rwapa mukushanya kwenyika.
eTurboNews kunanga uye kure-kurekodha kutaurirana nemakurukota, rubatsiro uye vamwe vakuru vakuru zvakanyatsosimbisa kutsigira kukuru kwevhoti yakadaro.
Izvo zvakare zvakasimbisa iyo yakakwira nhanho yekushungurudzika nhengo dzenhengo dzine iyo yazvino UNWTO.
Nekuda kwekupindira kweSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose, danho reHQ iri rinogona kunge rakamiswa kwechinguva, asi kutaurirana nekukurukurirana kwakatenderedza zvinoita kunge kuri kuenderera mberi.
Zvinogona kungotarisirwa chete kuti simba reSaudi Arabia uye simba remari kune yakachengeteka kushanya kwenyika ichaenderera. Ino ndiyo mukana weiyo nyowani yakasimba UNWTO, imwe nyowani yakasimba yekufamba pasirese, uye indasitiri yekushanya kuti ibude kunze kwedambudziko razvino.
NeSaudi Arabia yakabatanidzwa panga paine tariro kune dzakawanda nyika dzinovimba-dzekushanya munguva dzerima ramangwana.
Saudi Arabia inogona kunge iine huchenjeri hwekugadzirisa iyi nyaya uye kubatana neSpain. Zvichida nyika dzese pamwe chete dzinogona kutora chinzvimbo chakakosha kudzosa kukosha, kumira, uye kukurudzira World Tourism Organisation inoda kunge yakatungamira chikamu ichi kubva mudenda.
María Reyes Maroto Illera (akazvarwa muna Zvita 19, 1973) ndiye Gurukota reSpanish reIndasitiri, Kutengeserana, uye Tourism muhurumende yeMutungamiri Prime Minister Pedro Sánchez kubvira 2018.
Minister Maroto vaonekwa sevasina simba kuSpain. Gurukota rezvekushanya kuSpain, Reyes Maroto, vachitaura neCanal Sur Radio neMuvhuro, vakaratidza kuti kuputika kwegomo iri muLa Palma kwaigona kunge kuri kukwezva vashanyi., kukurudzira vashanyi kuti vauye.
Nhasi Lava kubva kugomo rinoputika paLa Palma asvika kugungwa. Chinhu chakanyanya kunetsekana nezviremera izvozvi makore ane chepfu aigona kusvika kuCanary Island, akagadzirwa nekubatana pakati pebwe rakaumbwa negungwa.
Kukunda / kuhwina kudyidzana neSaudi Arabia zvirokwazvo kwaizokwidza bhawa kune iyezvino Gurukota rekushanya kuSpain.
Chii chingatora kutora UNWTO?
106 mavhoti angadai akadikanwa kubvumidza danho remuzinda. Maererano ne eTurboNews zvinyorwa, padyo ne90% yemavhoti aya akange atochengetedzwa kare. Pakave nerutsigiro rwakakura kubva kuAfrica, nyika yeArabhu, asiwo maCaribbean, uye kunyangwe dzimwe nyika dzeEurope ..
Nei Saudi Arabia?
Saudi Arabia mune yayo 2030 Strategic Plan ine kushanya pakati pezvayo zvitatu zvakakosha.
Crown Prince Mohamed Bin Salman akataura kuti nyika unoenda kubva pa1% mupiro wekushanya kuenda kuGDP yenyika kusvika 10% muchirongwa chinoenda kusvika 2030.
Zano racho rakaitwa neSaudi Gurukota rezveKushanya Ahmed Al Khateeb.
Pakati paSeptember, Hurumende yeSpain yakaronga kushanya kune ramangwana UNWTO dzimbahwe kuMadrid, iyo Palacio de Congresos de La Castellana.
Scretary-General Pololikashvili akapinda mukushanya uku asi akazopona pamusangano wevatori venhau wakarongwa nemakurukota Reyes Maroto naJosé Manuel Albares. Iye haana kunetseka kuenda kune vezvenhau kana kuramba runyerekupe nezve shanduko yemuzinda uye kutsigira kwake Riyadh
Ipapo ndipo pakasarudza hurumende yeSpain kuenda kuUN.
Mwedzi yakati wandei yapfuura, UNWTO yakaronga foramu muimwe nyika yeSouth Africa kuti ikurukure nezve kurudziro yekuumba mubatanidzwa wekushanya kwenyika.
Vamiriri vanobva kunyika makumi mashanu nenomwe dzemu Africa vakapinda musangano uyu kwemazuva matatu. “Ikoko munyori-mukuru akakwanisa kutaura vari vega navo vese, uye vasina zvapupu kubva kune mamwe makondinendi.
Mari iyo Saudi Arabia yaida kuisa mukushanda ingadai yakaita zvakanaka kwazvo kune ese nyika 'mafambiro ekushanya uye ekushanya mapurojekiti.
Hukama pakati peSpain neUNWTO hwakanga husina kumbosiyana asi hwakadzikama, sekureva kwemushumo mune yekushambadzira nhepfenyuro yeSpain. "Spain zvisinei yakavhotera Zurab ichipesana neimwe sarudzo yaisanganisira mutevedzeri wemunyori wechiSpanish."
Chokwadi chekuve nemuzinda weUNWTO hachiite Spain guta guru repasirese rekushanya, zvichipesana neizvo vamwe vanga vachida kuona.
"Hurumende yeSpain haitombozivi kuti bhiri repamuzinda rinobhadharwa roga roga mwedzi wega wega uye hapana anozviziva nezvazvo kunze kwemukuru anoraira kuendeswa kubhangi, izvo zvichiri kungoitika zvega." Spain inobhadhara iyo UNWTO dzimbahwe. Zvese izvi zvinodhura Spain nezve 2 Million Euro pagore.
The UNWTO Secretary-General anopomera zvakafanana neInternational Labour Organisation (ILO) uye Director-General weUnited Nations Development Chirongwa (UNDP): $ 20,000 pamwedzi pamwedzi gumi nemaviri kubhadhara = $ 12. Iye zvakare anogamuchira € 240,000 pagore yeimba pamwe nemota uye mutyairi. Iye secretary-general anobhadharwa neUNWTO, kwete Spain.
Izvo zvinoripwa nenyika yega yega kuve nhengo yeUNWTO zvinoenderana neGDP, huwandu hwevanhu, uye mabikirwo evashanyi ayo anoshanda. Mari iyoyo haigone kudarika 5% yebhajeti yesangano.
Nyika dzinobhadhara zvakanyanya iFrance, China, Japan, Germany, neSpain, dzinopa mari inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu pamakumi matatu pagore. Ivo vanobhadhara zvishoma iSychelles neSamoa, nemubhadharo we357,000 euros pagore.
UNWTO inounza kukosha kushoma kune indasitiri yekushanya nenzvimbo. Yakatarisisa, isina bhajeti -12 mamirioni emadhora pagore, ayo 60% anoenda kumihoro-, nevatungamiriri vakasarudzwa nenyika dzayo. Uori hwemukati nekumira uye zvekare zvechinyakare zvaigara iri nyaya.
UNWTO parizvino ine 159 nhengo. Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rine nhengo dzenyika makumi matatu nenomwe.
United States yakasiya UNWTO muna 1995, Belgium muna 1997, United Kingdom muna 2009, Canada muna 2012, uye Australia muna 2014.
Zvakare, kusavapo iIreland, Cyprus, New Zealand, Luxembourg, uye nyika dzese dzeNordic: Iceland, Norway, Sweden, Finland, neDenmark, pamwe nenyika mbiri dzeBaltic, Estonia neLithuania dzinoita UNWTO sangano risina kusimba.
Zvakajeka gwara nyowani reUNWTO rakakosha kuti iyi UN-yakabatana agency kuti irarame.
Parizvino Saudi Arabia yapindura UNWTO uye World Tourism zvachose isina imwe nyika pasi. Kuchave neanotevera danho, izvo ndezvechokwadi.